Ungayisebenzisa kanjani i-GNU / Linux Operating Systems? | Kusuka kuLinux
Ungayisebenzisa kanjani i-GNU / Linux Operating Systems yethu?
Izicelo Zokukhulisa i-GNU / Linux
Ukuthuthukisa, noma ukusebenzisa kakhulu uhlelo lwethu olusebenzayo ukuthuthukisa ukusebenza okufanayo, kusukela ekuqaphelweni kwe- izinguquko ezithile ezinengqondo (zesoftware) noma zomzimba (ihadiwe) Endabeni yezinguquko zehadiwe, i-Operating System ingahlomula ngokuvuselelwa noma ngokukhuphuka ku-Hard Disk Space, RAM Memory, CPU Type, phakathi kwezinye izinto.
Endabeni esikhathazayo ngalo shicilelo, amathiphu noma izincomo zizoba sezingeni elinengqondo, njenge ukusetshenziswa kwezicelo noma ukwenziwa kwezenzo zobuchwepheshe ezisivumela ukuthi silondoloze izinga eliphezulu lokusebenza nokusebenza koHlelo Lokusebenza lwethu ngaphandle kwezindleko.
1 Lungiselela ukusebenzisa iTheminali
1.1 Layisha kuqala ne-Prelink
1.2 I-Deborphan ne-Localepurge
1.3 Izilungiselelo ze-Terminal
2 Ezingeni lokusebenzisa imidwebo
Lungiselela ukusebenzisa iTheminali
Kulabo abathanda i-Terminal ne-script ehleliwe, kunezinketho ezinjengalezi: «Ungasenza kanjani iSondlo se-GNU / Linux usebenzisa iSkripthi? y Ungasenza kanjani isipele sedatha kuzinsizakusebenza usebenzisa i-Shell Scripting? esikhulume ngayo muva nje. Lezi zibonelo ezi-2 zihlanganisa izici ezibalulekile zokugcina ama-Operating Systems wethu esesikhathini, agcina i-Operating System yethu ivuselelwe futhi ayinadoti wedijithali futhi igcina imininingwane ebanjelwe kuyo ivikelekile.
Kodwa-ke, ukugcwaliseka kwe- Le misebenzi yezandla noma ezenzakalelayo ingahlala ihambisana nokufakwa kwamaphakeji athile noma ukulungiswa kwezinye izinto ukwandisa izinga lokusebenza kahle, ukuzinza kanye / noma ukuphepha kwe-OS Isibonelo esihle sokwenza ngcono ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza zokugcina kungaba ukufakwa nokucushwa kwamaphakeji »Layisha kuqala» ne-Prelink « plus amaphakheji »I-Deborphan» ne-"Localepurge«.
Layisha kuqala ne-Prelink
Layisha kuqala uhlelo lokusebenza lokugcina ukuthi ihlaziya ukuthi iziphi izinhlelo zokusebenza ezisetshenziswa kakhulu, bese izilayisha ngaphambili kwimemori ye-RAM yedivayisi ngaleyo ndlela unciphise isikhathi sakho sokuqalisa lapho uzisebenzisa. Ngenkathi Isiqalo sokuqala kubuye kube uhlelo lokusebenza lokugcina kepha lokho inesibopho sokusheshisa ukulayishwa okunamandla kwemitapo yolwazi ye-OS kanye nezinhlelo zokusebenza ezibalulekile.
Ngalezi zinhlelo ezi-2 ndawonye, ​​ukusebenzisa i-GNU / Linux System yethu kulula kakhulu.
I-Deborphan insiza ethola amaphakheji "ayizintandane" ku-Operating System yethu. Masikhumbule ukuthi iphakethe lisesimweni »esiyizintandane» lapho lapho kukhishwa iphakheji yomzali (iphakheji efaka abanye ngokuncika ngokuzenzakalela), iphakethe elithi "ingane" lihlala lifakwe kudiski ngaphandle kokusebenzisa, lihlala isikhala esingenamsebenzi.
I-Deborphan inquma ukuthi imaphi amaphakheji angenawo amanye ngokuya ngokufakwa kwakho, futhi ikukhombisa uhlu lwalawa mapakeji. Ukusetshenziswa kwayo okuyinhloko kufuna imitapo yolwazi, kepha kungasetshenziswa ngamaphakeji azo zonke izigaba.
Ukusetshenziswa okuthuthukile kweDeborphan kungenziwa kusetshenziswa umugqa womyalo olandelayo:
Ngesikhathi I-Localpurge insiza esusa yonke imanuwali nezinsiza ezisolimini ngaphandle kwalezo ezilungiselelwe ngayo ngaphakathi kohlelo lwethu lokusebenza.
Lokhu kuyasiza kakhulu njengoba inqwaba yezicelo zivame ukufaka amabhukwana nosizo, ngezilimi zethu ezijwayelekile (iSpanishi nesiNgisi), nakwezinye izilimi esingasoze sazisebenzisa nakanjani. Lokhu ngokuhamba kwesikhathi, kujwayele ukuthatha isikhala esiningi kwi-hard drive yethu, ngemininingwane esingasoze sayisebenzisa.
Lezi ezinye izinhlelo zokusebenza zenza kube lula ngathi ukuthi sisebenzise i-GNU / Linux Operating System yethu.
Futhi phakathi kokulungiswa okungafakwa kungaba:
Sebenzisa, ngaphandle kwempande yomsebenzisi omkhulu, umsebenzisi ongumlawuliisb.umsebenzisi onezimvume zezimpande ezilungiselelwe ukusebenzisa umyalo weSudo, kanye nomsebenzisi ojwayelekile womsebenzisi ngamunye ukungena kwikhompyutha ukuze uyisebenzise.
Sebenzisa umbhalo wokugcina womcimbi wokugcina, oqopha yonke imiyalo ethayiphiwe ngaphakathi kwekhonsoli noma i-terminal ukugcina irekhodi elithembekile nelicwaningwayo lawo wonke umyalo othayiphiwe kuwo. Lokhu sizokuchaza ngokuqhubekayo kokuthunyelwe okuzayo.
Gcina amanani afanele usuku nesikhathi se-BIOS noHlelo Lokusebenza.
Qinisekisa ukumiswa okulungile kwe- amafayela »izixhumi zokuxhumana«, »resolutionv.conf«, »NetworkManager.conf» kanye »sources.list«
Ezingeni lokusebenzisa imidwebo
Kuleli zinga kunezicelo eziningi ezinhle ezinganconywa kepha ukuze ungenzi uhlu lube lukhulu kangako singancoma ezinye ezinjengalezi:
I-Bleachbit iyinsiza ye-multiplatform esebenza ngokuyinhloko ukukhulula isikhala kwi-hard disk yethu, kakhulu ngesitayela se- "ccleaner" esidumile nesisebenzayo ku-Windows. Futhi njenge »ccleaner«, kusivumela ukuthi sisuse amafayela, sinciphise amathuba okuthola kabusha.
Lokhu kugcina ubumfihlo bethu nokuvikeleka kahle, kusivumela ukuthi sandise kahle indawo yethu yamahhala yediski yethu, okuqinisekisa ukuthi umuntu wesithathu ngeke akwazi ukubuyisa imininingwane noma okungenani kalula.
Ezinye izinhlelo ezinhle kakhulu zalesi sitayela yilezi: Vula, I-Stacer y Umhluzi.
Kuyinsiza yokuqhafaza esiza ukwethulwa okubonakalayo kolwazi ngokusetshenziswa kwesikhala sediski, njengamaphesenti wokusetshenziswa, isikhala samahhala, ubukhulu bezinkomba namafayela e-OS yethu I-Baobab iyakwazi ukubona ushintsho kuma-hard drive ngesikhathi sangempela futhi lizihlaziye noma ngabe zikude noma zingamayunithi wendawo, phakathi kwezinye izakhiwo. Ingafakwa nge-console evela ezinqolobaneni ezivame kakhulu ze-Distros.
Izicelo ezifana neBaobab ezingasetshenziswa: Ukukhanya kwefayela, I-JDiskReport, I-QDirStat y k4dirstat.
Kuyisethi yamathuluzi avumela ukugcinwa (ukuhlanzwa) kwamafayela angenasidingo noma ngokweqile ngaphakathi kohlelo lokusebenza. Kufaka phakathi i-GTK + Graphical Interface, kanye ne-interface line line. Konke ukuze kutholakale kahle isikhala sediski. Ingafakwa nge-console evela ezinqolobaneni ezivame kakhulu ze-Distros. Futhi inamandla okukhipha amaphakheji nokuthola izinto ezinjenge:
Amafayela aphindwe kabili
Amagama efayela anenkinga
Izixhumanisi ezingokomfanekiso ezilimele noma eziphelelwe yisikhathi.
Izicelo ezifana ne-FSLint ezingasetshenziswa: Isitholi Samafayela Esiyimpinda y I-GDuplicateFinder.
Uma wazi abanye abangasisiza, baphawule! Kokunye ngithemba ukuthi le ndatshana njengenjwayelo isisiza sonke ukwenza ama-GNU / Linux Systems wethu alingane noma angcono kunanoma iyiphi enye ephathelene! Kuze kube okuthunyelwe okulandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungayisebenzisa kanjani i-GNU / Linux Operating Systems yethu?
Lezo zikhathi zokuzula kwami ​​eLinux =)
UHector elizalde kusho
Sanibonani, bengisebenzisa i-BleachBit ohlelweni lwami lwe-Linux Mint 19.2 futhi iqiniso lingisebenzele kahle kakhulu, kulula ukufaka nokusebenzisa i-pro kufanele uqaphele lapho uyisebenzisa kwimodi ye-Root, ngoba okususiwe kulahlekile kuze kube phakade. ukusuka lapho kuqhubeke kuhle kakhulu
Phendula uHector Elizalde
UPaul letelier kusho
Okuthunyelwe okuhle, kepha angikukhuthazi ukusebenzisa iDephorban ngezincomo ezichaziwe, okungenani hhayi umuntu ongenalwazi (njengami). Lokho akulungisanga kahle ikhibhodi negundane lapho ngifaka ideskithophu, ngakho-ke bekufanele ngenze konke ukufaka kabusha i-xserver-xorg ... Akukho lutho olubucayi, kepha ngichithe amahora ambalwa ngicwaninga ukuthi ngiyilungisa kanjani. Jabulela
Phendula uPablo Letelier
Ngiyabingelela, Pablo. Impela uDeborphan ngumyalo ocophelelayo, ngoba, uma ungenalwazi futhi wamukela ukususwa kwalokho uDeborpahn angacela ukukususa, izinkinga ezinjengalezi ozibikayo zingavela, ngichithe okuningi ekuqaleni ngaloyo myalo.
Uhlobo olusha lweRecalbox 18.06.27 seluyatholakala
Injini yakwaGodot: Injini Yemidwebo Yomthombo Ovulekile Ikhombisa Idemo Yesithathu Yokudubula